Global Voices teny Malagasy » Goatemalà: Oram-batravatra Sy Tondradrano Namely Ireo Tena Fadiranovana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Mey 2018 5:27 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika (fr) i PREPA ECT2, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Voina
Sary : Mesas de Diálogo.
Faran'izay tena sarotra ho an'ny maro tamin-dry zareo Goatemalteky ny volana Oktobra 2008. Nandritra ny tafiotra tao an-toerana, azo adika ho faharavàna bebe kokoa ireo oram-batravatra sy tondradrano, ny tsy fisian'ny politikam-panjakana ho fiatrehana ny loza voajanahary, satria potika ny vokatra, rava tanteraka ny trano ary ny olona voalevina velona tany anatin'ireo tany nihotsaka.
Vondrom-piarahamonina marobe no nopetahan'ireo tafiotra sy tondradrano, saingy ny fiantraikany mafy indrindra dia tany amin'ireo izay miaina ambany nohon'ny fetra farany ambanin'ny fahantràna. Matetika ireny vondrom-piarahamonina ireny no tsy mahazo tolotra na fialofana, toy ireo vohitra kely any amin'ny faritr'i Peten, Quiché ary Zacapa. Araka ny lazain'ny El Poptuneco , [amin'ny teny espaniôla, toy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra], tonga tamin'ny angidimby tany Porptun, iray amin'ireo faritra voadona, ny filoha Álvaro Colom. Nampiasain'ny governora, Rudel Alvarez, ihany koa ny bilaoginy manokana  mba hanomezana tsy tapaka ny fandehan'ny zavamisy sy hamoahana ireo filazàna farany momba ny toetrandro, tamin'ny fanambaràna fa io no loza voajanahary nahatsiravina indrindra tao anatin'ny folo taona tany Sayaxche, vohitra iray hafa ao atsimon'i Peten, ahitàna ireo fianakaviana 288 miaina anaty fahantràna lalina trà-doza tamin'ireo oram-batravatra sy tondradrano.
Ny bilaogy Mesas de Dialogo  nitatitra fijoroana vavolombelona iray momba io krizy io :
Nisidina ireo faritra trà-doza ry zareo ny 21 Oktobra 2008 ary nahita vehivavy iray teny lavitra teny. Nipetraka, araka izany, ilay angidimby. Nohazavain'ilay ramatoa fa efa ho efatra andro izao ny ankohonany no tsy nihinana sakafo, ary rava ny trano sy ny vokatr'izy ireo.
Tsy afaka idirana amin'ny alàlan'ny fiara ilay vohitra, ka tsy vita araka izany ny hitondra fanampiana ho azy ireo raha tsy avy eny an'habakabaka.
Ny bilaogin'ny fanaovana gazetin'olontsotra El Zacapaneco no manao famintinana momba ireo faharavàna fotodrafitrasa tao Zacapa (Atsinanan'i Goatemalà) , amin'ny fanomezana fanazavàna hoe ny vohitr'i La Union dia nizaka indray fihotsahan'ny tany izay nanapaka ny lalàmbe fidirana ao aminy.
Saingy eo foana ny firaisankina, toy ny anazavan'ny El Portal de Peten  azy, satria ny Rainforest Alliance efa nilaza sahady ny fanohanany. Nambaran'ny bilaogy Municipal News  fa amin'izao fotoana izao ireo kiobàna mpitsabo dia manampy ireo olona any amin'ireo faritra tena voa mafy. Nandefa antso ho fanolorana fanafody, fitafiana ary sakafo ihany koa ny Caritas Guatemala ary azo atao ny mifandray amin'izy ireo ato .
Mampalahelo ny mamaky ny momba ny karazana loza voajanahary tahaka izao isantaona ary dia tratra foana ny faritra sasany. Mandritra izany fotoana izany, tsy misy fepetra, na kely aza, na politikam-panjakana napetraka mba hilazàna mialoha ny ho fahavoazana. Midangana be anefa ny sandany : famoizana ain'olona, trano, vokatra lasan'ny rano tondraka, araka izay azonareo jerena amin'ireo saripika  nopihan'i Arturo Godoy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/25/119983/
 ny bilaoginy manokana: http://blog.rudelalvarez.net/
 Ny bilaogy Mesas de Dialogo: http://miparticipacion.blogspot.com/2008/10/poptn-no-solo-afecta-crisis-econmica.html
 dia nizaka indray : http://www.elzacapaneco.com/contenido/index.php?s=sufre+de+nuevo&searchbutton=Ir%21
 anazavan'ny El Portal de Peten: http://www.elportaldepeten.com/nuevo/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=1
 Municipal News: http://noticiasmunicipalesguatemala.blogspot.com/2008/10/mdicos-cubanos-atienden-evacuados-por.html